Madaxweyne Axmed Madoobe oo sagootiyay xildhibaanada Baarlamaanka ee Jubaland u matalaya + Sawirro | Maanta Online
Home / Sawirada / Madaxweyne Axmed Madoobe oo sagootiyay xildhibaanada Baarlamaanka ee Jubaland u matalaya + Sawirro
Posted by: admin in Sawirada, Wararka December 13, 2016	Comments Off on Madaxweyne Axmed Madoobe oo sagootiyay xildhibaanada Baarlamaanka ee Jubaland u matalaya + Sawirro 624 Views
Magaalada Kismaayo ee xarunta maamul goboleedka Jubaland waxaa ka dhacday munaasabad ballaaran oo lagu sagootinayay xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka cusub u matalaya maamulkaasi.
Xaflada oo ahayd mid sagootin ah ayaa waxaa halkaasi ka soo qeyb galay madaxda maamulka Jubaland sida Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee Jubaland, Xildhibaanada la doortay iyo xubno kale.
Cabdi Cali Raage oo ah Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Jubaland oo ka hadlayay munaasabaddaasi ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay howlaha ballaaran iyo xaaladihii kala duwanaa ee ay soo martay doorashadii ka dhacday Kismaayo.
“Waxaan u mahad celinayaa dhammaanba madaxda, maamulka iyo ciidamada amniga oo suurageliyay in lagu guuleysto doorashooyinka labada aqal” ayuu yiri Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo sheegay in xildhibaanada la doortay ay noqdaan kuwo dalkooda iyo dadkooda si daacad ah ugu adeega.
Sidoo kale Madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo halkaasi ka jeediyay khudbad ballaaran ayaa dardaaran u jeediyay xildhibaanada Baarlamaanka cusub, wuxuuna tilmaamay in looga baahan yahay sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda.
“Caawa waxaan idiin ballan qaadayaa inaan idinkaga harin oo aan idin garab istaagno, Kismaayo guryo aad degtaan baan idinka siinayaa, Xamarna waxaad ku leedihiin madal” ayuu yiri Madaxweyne Axmed Madoobe oo ku booriyay xildhibaanada inay muujiyaan isku xirnaan, karti iyo hufnaan waxqabad muuqda leh.
Waxaa kale oo Axmed Madoobe u sheegay xildhibaanada in maanta talada gacantooda ku jirto, isla markaana ay noqdaan kuwo bog cusub u fura xaalada dalka Soomaaliya, si looga baxo habkii qabiilka.
Dhinaca kale waxaa halkaasi khudbado kala duwan ka jeediyay qaar ka mid ah Xildhibaanada Jubaland u matalaya Baarlamaanka cusub iyo sidoo kale ka qeyb galayaasha munaasabadda sagootinta ah, iyagoona dhammaantood hoosta ka xariiqay inay ka shaqeynayaan danaha guud ahaan shacabka Soomaaliyeed iyo sidii loogu soo dhisi lahaa xukuumad awood u leh soo celinta nabadgelyada, dowladnimo wanaaga iyo soo celinta qaranimada.
Previous: Munaasabad lagu xusayay dhalashada nabigeenna Muxamad NNKH oo lagu qabtay Magaalada Tromsø + Sawirro.
Next: XASUUQA AADANAHA, MISE XUQUUQDA AADANAHA!!?